Ihe ị ga-ahụ na Northern Ireland | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Ihe ị ga-ahụ, United Kingdom
Ruo ọtụtụ afọ North Ireland Ọ dịbeghị na maapụ njem nleta, nke nwanne ya nọọrọ onwe ya na akụkọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ya kpuchiri ya, mana ruo oge ụfọdụ ugbu a, njem nlegharị anya achọpụtawo ebe nkiri ya. !! Ndeewonu !!
Taa, Northern Ireland na ebe nkiri ya niile na-echere anyị: nnukwu ụlọ, ụka, ụzọ ochie na Game nke n'ocheeze.
2 Ihe ị ga-ahụ na Northern Ireland
Es akụkụ nke UK, akụkụ nke na-enwetaghị nnwere onwe laa azụ na mmalite narị afọ nke iri abụọ. Ruo ọtụtụ iri afọ, akụkọ ihe mere eme nke ọchịchị ya bụ nke ndị akara eneni ke ufọt mbon Catholic ye mbon Protestant na-eyi ọha egwu ihe nke IRA na ndị agha Britain nọ n’agwaetiti ahụ.
Kedu ọdịdị ala agwaetiti a nwere ụdị akụkọ ihe mere eme dị ka? Ọfọn, n'oge nke Ice Age, ọ dị oyi ma oge oyi ya adịchaghị mma. Ekwuru na obi ya bụ Loch Neagh nke nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ square kilomita 400, nke kachasị ukwuu na agwaetiti Britain niile. Enwere ọtụtụ ọdọ mmiri mana enwerekwa ugwunke basalt na granite, ugwu na ndagwurugwu.
Ọ na-abụkarị oke oke ọhịa, nke nwere osisi oak, osisi pine, willows na ndị ọzọ, mana ugbu a mpaghara ọhịa anaghị eru 10% na ụdị mbụ anaghị adị. Ihe ihere Na-ekwu okwu na-ekwu okwu enwere mpaghara akụkọ ihe mere eme isii: Antrim, Fermanagh, Londonderry, Tyrone, Ala na Armagh.
Kedụ ka ị ga esi aga mpaghara ndị ahụ? Ọfọn, ọ bụghị na Northern Ireland nwere nnukwu usoro njem, ọ bụghị ya. Gagharị na obodo ukwu esighị ike, mana ịhapụ obodo ndị mepere emepe na-akwụ ụgwọ karịa ma chọọ nhazi ọzọ.
Dị ka e nwere nnukwu ụlọ na ụlọ akụkọ ihe mere eme, ụsọ osimiri, nnukwu ụlọ, ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, oke ọhịa na ogige ntụrụndụ na n'ezie, ọnọdụ ndị metụtara Egwuregwu ocheeze. A na-eme atụmatụ na e nwere ihe dị ka nnukwu ụlọ 200 ileta ọ bụ ezie na mmadụ ga-eme nhọrọ. Nke anyi bu nke a:
Ugwu Carrickfergus: Ọ bụ nke kachasị ukwuu na nke a ma ama na mpaghara a, ọ tọkarịrị Belfast, nke wuru na 1177 site n'aka John de Courcy, onye mbuso agha Anglo-Norman si Ulster. Ọ na-emeghe nke ọhaneze ma ọ bara uru ileta.
Nislọ Enniskillen: O duuru ọtụtụ nnupụisi megide Bekee dịka ọ dị na ókèala Irish. Ndị Maguires wuru ya, otu ezinụlọ Gaelic, yana narị afọ isii ya, ọ dabere n'ụsọ Ọdọ Mmiri Erne.
Lulọ DunluceỌ dị na oke okwute dị nso n'oké osimiri na ọ bụ ezie na ọ bụ mkpọmkpọ ebe ha ga-abụ mkpọmkpọ ebe ịhụnanya kachasị n'ụwa. E wuru ya na narị afọ nke XNUMX, ọ pụtara na Ihe E Mere nke Narnia na ịchọta ya na County Antrim.
Harry Avery Castle: Ọ bụ na County Tyrone na ọ bụ otu n'ime ole na ole nke Irish Chief O'Neill wuru, ghọrọ Harry Avery. Ọ bụ nnukwu, n’elu ugwu, nwere echiche magburu onwe ya. O meela ihe karịrị narị afọ isii.
Elflọ Belfast: Ọ dịchaghị ka nnukwu ụlọ, ọ dị n’etiti obodo ahụ, ndị Norman wuru ya na narị afọ nke iri na abụọ. Na narị afọ nke XNUMX ọ bụ ụlọ nke ezinụlọ Chichester na agbanyeghị na ọ dị na ụdị Norman a gbara ya ọkụ ma wughachi ya n'ụdị Victorian.
Ezigbo Shane: dị na Antrim ma gosipụta na Game nke n'ocheeze. Ọ gbara ọkụ na narị afọ nke XNUMX na enwere ike ileta mkpọmkpọ ebe ahụ.
Onelọ Monea: Emegharịrị ya n'oge afọ Ọgbọ Bekee na Ireland na narị afọ nke XNUMX. N'agbanyeghị akụkọ ihe mere eme ya ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị.
Illslọ nke Hillsborough: Ọ bụ karịa ụlọ Georgia nke e wuru na ngwụsị narị afọ 10. Taa ọ bụ ụlọ eze, ebe obibi nke ezinụlọ eze mgbe ọ nọ na Northern Ireland. Ọ nwere ubi mara mma ma nwee ike ileta ihe niile maka £ XNUMX.
E wezụga ụlọ ndị a, e nwere ndị ọzọ na-atụ aro ịgagharị, anaghị eleta ha. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ime ya Lezọ Ugwu WardCounty Down, ụzọ dị kilomita abụọ site na mpaghara mara mma nke na-esite na nnukwu ụlọ gaa Audrey Castle, nke dị na usoro egwuregwu nke oche n'oche bụ Robb's Camp. Ọ bụ narị afọ nke XNUMX na-ewu ma na obodo dị n'ụsọ oké osimiri ị nwere ike iri ezigbo azụ mpaghara.
Castlọ ndị ọzọ ị ga-agagharị bụ Lọ Benburb, Antrim Castle, Dunseverick & Dunluce Castle na Crom Estate, ọmụmaatụ. Ị chọrọ anọru ụra na nnukwu ụlọ? O kwere omume. I nwere ike ime ya na Clọ Cromn'ime Warara Castle, udi kpakpando ise, ma obu na Ballygally Castle, kpakpando anọ ma nwee osimiri aja na aja na otu aha, dịka ọmụmaatụ.
Ndị ọzọ mere ụlọ na ị nwere ike ịga bụ Ebe ugwu Northern Ireland na ebe obibi ndi mọnkCamino de San Patricio gafere ala ndị a, ya mere, ebe a bụ saịtị okpukpe kachasị mma iji gaa:
Mmiri Struell- Ọ bụ akụkụ nke St Patrick’s Trail ma dịkwa na ndagwurugwu na Downpatrick. Ọ bụ ebe njem njem njem a na-ewu ewu kemgbe narị afọ nke XNUMX na mmiri kwenyere na ha nwere ike ịgwọ ọrịa.
Ebe obibi ndị mọnk Bonamargy: Ọ dị na County Antrim ma Rory MacQuillian wuru ya na afọ 1500. O nweghị ụlọ ma ọ dị mma.
Anụ ọhịa Abbey: Ọ dị n'akụkụ Osimiri Quoile ma tọrọ ntọala ya John de Courcy. Ihe foduru nke ụlọ ndị ahụ sitere na narị afọ nke iri na abụọ na nke iri na atọ.
Grey's Abbey: E hiwere ya na 1193 ma ọ nọ na ego nke Ebe Obibi Rosemount. Ọ bụ mkpọmkpọ ebe, ma ọ bụ ebe mara mma.
Ebe obibi ndị mọnk Nendrum- Ọ bụkwa akụkụ nke San Patricio Trail ma kwenyere na San Machoi wuru ya na narị afọ nke ise.
Obodo Devenish: ọ dị na Fermanagh Lakes, ebe dị anya ma mkpọmkpọ ebe. Ruo ọtụtụ afọ Vikings bibiri mpaghara ahụ mana oge ụfọdụ na Middle Ages ọ toro.
E wezụga ịga na saịtị ndị mere eme, ihe m hụrụ n'anya, Northern Ireland nwere ebe aga kporie ndu ya ma mee egwuregwu mmiri, ịnyịnya ígwè, ịkụ azụ, golf, njem ma ọ bụ nọrọ ụbọchị n'ụsọ osimiri.
Mee Alzọ Osimiri Ọ bụ nnọọ ahụmahụ, ee: ọ na-amalite na Binevenagh, gafere Mountsandel, na Bushmills Distillery, na Carrick-a-rede Bridge, na Joey & Robert Memorial Gardens, Arthur's House, Rathlin Island, the Nnukwu ụzọEbe a ka m kwụsị: ọ bụ World Heritage Site na ọ bụ ihe gbasara mbara ala nke nwere puku 40 puku basalt guzobere 60 nde afọ gara aga.
Ma karịa ihe niile ị nwere mmasị Egwuregwu ocheeze? Yabụ enwere ọtụtụ ihe ị ga-eme n'etiti agbama uto na ochie nri abalị elu Nleta eduzi gaa na saịtị ndị ahụ edere usoro ahụ.
Eziokwu bụ na ihe ndị ọzọ ejiji na-emetụta usoro HBO a mana tupu ya akụkọ ihe mere eme nke titanic O were nlebara anya na n'echiche a, na Belfast, enweghị m ike ichefu ụlọ ihe ngosi nka, ogige ụgbọ mmiri na ihe niile dị ebube nke Northern Ireland wuru gburugburu iwu na ọdachi nke ụgbọ mmiri akụkọ a. Echefula ya!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Nkechi » United Kingdom » Ihe ị ga-ahụ na Northern Ireland
Ihe ị ga-ahụ na Piran, Slovenia